हाम्रो विकास बैंकको २००% हकप्रद खुल्यो, फारम कुन ठाउँबाट भर्ने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » हाम्रो विकास बैंकको २००% हकप्रद खुल्यो, फारम कुन ठाउँबाट भर्ने ?
काठमाडौं - हाम्रो विकास बैंकको आइतबार देखि २००% हकप्रद बिक्री खुला भएको छ । बैंकले १ः२ अनुपातमा सेयर बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ३० लाख ५८ हजार ३३८.७५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यो हकप्रद असार ११ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । हकप्रद निष्कासनपछि हाम्रोको चुक्ता पुँजी ४५ करोड ८७ लाख ५० हजार ८१२ रुपैयाँ पुग्नेछ । वैशाख १० गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीलेमा मात्र यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाडौं तथा हाम्रो विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बिदुर ३ बट्टार नुवाकोट र अधिकांश शाखा कार्यालयबाट यसमा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा कार्यालयहरु विराटनगर, चिप्लेढुङ्गा पोखरा, वीरगञ्ज, नारायणगढ, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । हाम्रोको बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।